people Nepal » आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल जेठ ३० गते बुधबार आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल जेठ ३० गते बुधबार – people Nepal
आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल जेठ ३० गते बुधबार
Posted on June 13, 2018 by Durga Panta
आज श्री शाके १९४० बि.स. २०७५ साल ज्येष्ठ ३० गते बुधबार इश्वी सन् २०१८ जुन १३ तारीख अधिकज्येष्ठ कृष्ण औसि तिथी चन्द्रमा बृष राशिमा सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु अधिकमास समाप्ती मत्स्यनारायण मेला समाप्ती हलोबार्ने निशि बार्ने –
भोजभतेर जन्य कार्यमा सहभागीताको अवसर प्राप्त हुनेछ । कुलकुटुम्बहरुको साथसहयोगमा स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानि उत्तम साबित रहनेछ । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नुपर्ने समय रहेकोछ । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहला ।
मानसम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ । ब्यापार ब्यवसायमा समय उत्तम रहनेछ । पारीवारीक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । सामान्य यात्राको सम्भावना रहेकोछ । अरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ ।
सामान्य आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्ने समय रहेकोछ । भोगविलास जन्य कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ । स्वास्थका क्षेत्रमा समेत सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । मित्रजनहरुको साथ सहयोग भने बृद्धिहुनेछ ।
आय आर्जन उत्तम रहनेछ । नयाँ कार्यका क्षेत्रमा गरीएको लगानि उत्तम रहनेछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा अधुरा कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । प्राकृतिक श्रोत साधनको प्रयोग द्वारा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ ।
अधुराकार्यहरु सम्पादन गर्नका निम्ती समय उत्तम रहेकोछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोग मनग्य प्राप्त रहला । सभासम्मेलनमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ साथै सामान्य मानसम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ ।
मनोरञ्जनपुर्ण यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । अरुद्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय प्राप्त रहनाले मनमा उत्साह जाग्नेछ । मित्रजनहरुको साथ सहयोग द्वारा मनमा आटँ शाहसको बृद्धिहुनेछ । सामान्य खर्चको योग रहनेछ ।
स्वास्थक्षेत्रमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । बिश्वासिला ब्यत्तिहरु द्वारा सामान्य धोका प्राप्त हुनेछ । खानपानका क्षेत्रमा सजग रहनु होला । आम्दानि क्षेत्रभने मध्यम रहनेछ । मित्रजनहरुको अधिक सामप्यिता उत्तम नरहला ।
दाम्पत्य सम्बन्धमा समान्य उत्तर चढाव आईपर्नेछ । ब्यापार ब्यवसायमा भने समय उत्तम रहेकोछ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । अध्यन अध्यापनका निम्ती समय मध्यम रहनेछ । सामान्य खर्चको सम्भाबना रहनेछ ।
प्रतिश्पर्दीहरुको बृद्धिहुनाले कार्य सम्पादनमा बिशेष सजगता अपनाउनु पर्नेछ । स्वास्थका क्षेत्रमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । सामान्य यात्राको सम्भाबना रहनेछ ।
बिशिष्ट ब्यत्तिहरुको साथ सहयोग प्राप्त रहनेछ । रचनात्मक कार्यका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । आम्दानिका बिभीन्न श्रोत हरु प्राप्तहुनेछन । अध्यन अध्यापनको क्षेत्र उत्तम रहनेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
पारीवारिक साथ सहयोगले अधुरा कार्य सहजता पुर्ण सम्पादित रहनेछन । मानसम्मान प्राप्तीको सम्भाबना रहेकोछ । नयाँकार्य थालनि गर्न समय उत्तम रहेकोछ । तपाई द्वारा सम्पादितकार्य प्रशम्सा लायक रहनेछ ।
सामान्य चोटपटकको सम्भाबना रहेकोछ । आफन्त जनहरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ । टाढाँको यात्राको सम्भाबना रहनेछ । मित्रजनहरुको साथसहयोग मिल्नेछ ।
आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ फाल्गुन १० गते शुक्रबार
आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ फाल्गुन ०९ गते बिहीबार